အလယ်အလတ်မွတ်ဆလင်နဲ့ အစွန်းရောက်မွတ်ဆလင် ~ Myanmar Express
မွတ်ဆလင်များ အစွန်းရောက်ခြင်း ၊ အစွန်းမရောက်ခြင်းသည် မွတ်ဆလင်လူဦးရေအချိုးအစားနှင်တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်မွတ်ဆလင်လူအင်အားမကောင်းသေးသော ၊ မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀% မစွန်းသေးသော နိုင်ငံ၊ မြို့၊ ဒေသများမှ မွတ်စလင်များမှာ ( မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀% မစွန်းသေးသောကြောင့်) ၊ အချိန်မတန်သေးသောကြောင့် အစွန်းမရောက်သေးပါနိုင်ငံ၊ မြို့၊ ဒေသများတွင်း မွတ်ဆလင်လူအင်အားများလာသော၊ မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀% စွန်းသွားသော ကျော်သွားသော နိုင်ငံ၊ မြို့၊ ဒေသများမှာ မူ အစွန်းရောက်ဖို့ အချိန်တန်ပြီဖြစ်သဖြင့် ဘူးသီးတောင် မွတ်စလင် ၉၅%မောင်တော ၉၅%၊ သံတွဲ မွတ်စလင် ၆၀% စစ်တွေ မွတ်စလင် ၅၀% ဖြစ်သွားသောကြောင့် အစွန်းရောက်သွားကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။အကယ်စစ်စစ် အစွန်းရောက် မွတ်စလင်ဆိုသည်မှာ မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀%စွန်းသွားသောကြောင့် အစွန်းရောက်ဖို့ အချိန်တန်သွားသောကြောင့် အစွန်းရောက်မွတ်စလင်ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ကာအစွန်းမရောက်မွတ်စလင်ဆိုသည်မှာ မူ မွတ်ဆလင်လူဦးရေ အစွန်းမရောက်သေးသောကြောင့် ၊ မွတ်ဆလင်လူဦးရေ အလယ်အလတ်ပဲရှိသေးသောကြောင့် အစွန်းရောက်ဖို့ အချိန်မတန်သေးသောကြောင့်အလယ်အလတ်မွတ်ဆလင်ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ယခု ရန်ကုန်၊ မန်းလေးမွတ်ဆလင်များကို ကြည့်ပါ။ရန်ကုန်၊ မန်းလေး မှ မွတ်ဆလင်များသည် ထိုင်းတောင်ပိုင်း၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော မှ မွတ်ဆလင်များကဲ့သို့ အစွန်းရောက်မွတ်ဆလင်များ မဟုတ်ပဲ လူများစု ဗုဒ္ဓဘာသာများနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေသော ငြိမ်းချမ်းသောမွတ်ဆလင်များ ဖြစ်နေသည်ကို သင်တွေ့ နိုင်ပါသည်။မွတ်ဆလင်လူဦးရေ ၅၀% မစွန်းသေးသောကြောင့် အချိန်မကျသေးသောကြောင့် အစွန်းမရောက်ကျသေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုင်းတောင်ပိုင်း၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော မှ မွတ်ဆလင်များမှာ မူ မွတ်ဆလင်လူဦးရေ ၅၀% စွန်းသွားသော ကြောင့် အချိန်ကျပြီ ဖြစ်သောကြောင့် အစွန်းရောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။သရက်သီးနဲ့ ဥပမာ ပေးပါမည်သရက်သီး စိမ်းမျိုး၊ သရက်သီးမှည့် မျိုးဟူကာ နှစ်မျိုးမရှိပါ။ သရက်သီးတစ်မျိုးသာရှိပါသည်။အချိန်မတန်သေးသော၊ စောသေးသော သရက်သီးက စိမ်းကာ၊ အချိန်တန်သော သရက်သီးက မှည့်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမြဲတမ်းစိမ်းနေတဲ့ သရက်သီးမျိုး.......အမြဲတမ်းမှည့်နေတဲ့ သရက်သီးမျိုး...ဆိုတာ ရှိကိုမရှိဘူးသရက်သီးက သရက်သီးပဲ....အခြေအနေ ကာလံဒေသကို ကြည့်ပြီး သရက်သီးက မှည့်သွားသလိုအခြေအနေ ကာလံဒေသကို ကြည့်ပြီး သရက်သီးက မမှည့်သေးတာပဲ ရှိတယ်သရက်သီးက သရက်သီးပဲ....Myanmar Express
17 July 2012 18:05
This is true. You really know the characteristic of Muslim.
17 July 2012 18:26
မွတ်ဆလင်စုစုပေါင်း သန်း ၁၈၀၀မြန်မာတိုင်းရင်းသားစုစုပေါင်း သန်း ၆၀ဘင်္ဂလီမွတ်ဆလင် သန်း ၁၇၀ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ မွတ်ဆလင် ၇သန်းရခိုင်လူမျိုးစုစုပေါင်း ၄သန်းတကယ်တမ်းဖြစ်လာရင် ဘယ်သူက ခံရမှာလဲဘယ်လူမျိုး ၊ ဘယ်တိုင်းရင်းသားက ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်လဲဘယ်လူမျိုး ၊ ဘယ်တိုင်းရင်းသားကို ကာကွယ်ပေးသင့်သလဲ။ဘယ်သူက လူနည်းစုလဲ ဒေါ်စုပြော-
17 July 2012 19:42
17 July 2012 23:06
အကြံပြုချင်ပါတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများစီပွားလဲဖြစ်ကုလားလဲပြေး အောင်အကြံပြုရမယ်ဆိုရင် ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုအိမ်တိုင်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ နယ်စပ်စည်းတွေကိုဝက်ခြံတွေနဲ့ကာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကုလားမှဝင်လာရဲမှာမဟုတိပါဘူးဘယ်လိုလဲအကြံကောင်းလား
18 July 2012 00:42
မြန်မာတစ်ပြည်လုံး မွတ်ဆလင်ရန်မှ ကာကွယ်ရန် အိမ်တိုင်းတွင် ၀က်မွေးကြပါ။မွတ်ဆလင်ကို ၀က်က ငယ်နိုင်ပဲ အိမ်တိုင်းတွင် ၀က်မွေးကြပါ။ .
18 July 2012 01:25
သတင်း — July 17, 2012 at 8:17 pmစစ်တွေ နည်းပညာ ကောလိပ် ကျောင်းသားများ တိုက်ခိုက်ခံရမောင်အေး၊ ထွန်းထွန်းယမန်နေ့က ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော စစ်တွေ နည်းပညာ ကောလိပ်မှ ကျောင်းသားများကို ယနေ့ ကျောင်းဆင်းချိန်တွင် မွတ်ဆလင် လူအုပ် တစ်ခုက တိုက်ခိုက်ခဲ့ သည်ဟု သိရသည်။“ ဖြစ်တာက နေ့လည် ၁ နာရီကျော် ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျောင်းကားတွေကို ဘင်္ဂလီတွေက ဆွဲလား ရမ်းလား လုပ်တယ်လို့ ဒီလိုဘဲ ကျွန်တော် တို့ သတင်းရပါတယ်” ရခိုင်ပြည်နယ် ပြန်ကြားရေး အရာရှိ ဦးဝင်းမြိုင်က ပြောသည်။ယခုကဲ့သို့ ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရင်းကို မေးကြည့်ရာ သူက ယခုလို ဆက်ပြောသည်။“ သူတို့က ကျောင်းကားတွေကို တိုက်ခိုက်တာတွေ လုပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားတွေက ကျောင်းသားတွေ အတွက် စီစဉ်ပေးထားတာ။ အရပ်သားတွေ အတွက် မဟုတ်ဘူး။ ကျောင်းကားတွေကို တိုက်ခိုက်ရာကနေ ပြဿနာ ဖြစ်ကြတာပါ။ နောက်ပိုင်း လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ရောက်လာတော့ ပြဿနာက ပီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းမြိုင်က ပြောသည်။ယခု တိုက်ခိုက်သည့် ဘင်္ဂလီရွာသားများမှာ ရေချမ်းပြင် အနီးရှိ ရွာကြီး၊ ရွာငယ်မှ ဖြစ်ပြီး တစ်ချို့မှာ ၎င်းရွာများ အနီးရှိ ကုတင်ပိုက်ရွာက ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။နည်းပညာကောလိပ်မှ ကျောင်းသားတစ်ဦးကလည်း သူတို့ ယနေ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အခြေအနေကို ယခုလို ပြောသည်။“ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ နည်းပညာကောလိပ် အနီးက အပြင်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ ဘင်္ဂလီ ရွာသားတွေက တုတ်တွေ၊ ဓါးတွေကို ထမ်းပြီး အုပ်စုလိုက် ပြေးလိုက်လာကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကျောင်းဆင်းချိန်ဆိုတော့ ကျောင်းပြင် လမ်းပေါ်ကနေ ကျောင်းထဲကို ပြန်ဝင် ပြေးကြတော့ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်ကုန်ပြီး ကျောင်းသူတွေ ငိုယိုပြီး အကူအညီ တောင်းကြတော့ အခြေအနေက ရုတ်ရုတ်သည်းသည်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြားတာက ဘင်္ဂလီတွေနဲ့ ဂျီအီး တပ်က လူတွေ ရှေ့မှာ ပြဿနာ တက်နေကြတယ်လို့ဘဲ ကြားပါတယ်” ဟု ပြောသည်။အခင်း ဖြစ်ပွားစဉ် သုံးဘီး ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင် ပါလာသူ ဆရာမ တယောက်က သူမြင်တွေ့ ခံစားရပုံကို ယခုလို ပြောသည်။“-အခုဆိုရင် ကျွန်မတို့ လုံခြုံမှု လုံးဝမရှိတောပါ။ ကျွန်မတို့ကို ဆိုင်ကယ်ကို တုတ်တွေ ဓါးတွေနဲ့ ဘင်္ဂလီတွေက လာတိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့က အသက်လု ပြေးကြရပါတယ်။ ဆိုင်ကယ် တက်စီ ဒရိုင်ဘာမှာ ဒဏ်ရာ ရရှိသွားပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ကျောင်းကို ဆက်မသွားနိုင်တော့ပါ။ အလုပ်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တောင် အလုပ်ပြုတ်ခံတော့မှာပါ” ဟု ပြောသည်။ဦးဝင်းမြိုင်မှ စစ်သားများနှင့် စတင် ပြဿနာ ဖြစ်ပွားခြင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆိုသလို ဒဏ်ရ ရသူလည်း မရှိပါကြောင်း ပြောသည်။လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း ဦးဝင်းမြိုင်က ယခုလို ပြောသည်။“ လုံခြုံရေးကတော့ ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ရှိပါတယ်။ လမ်းတွေမှာတော့ မရှိဘူး။ ဒါကြောင်း မနက်ဖြန်က စပြီး လမ်းတွေမှာလည်း လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်သွားပါမယ်” ဟု ပြောသည်။ယနေ့ ကျောင်းကားများကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် မွတ်ဆလင် ရွာသား ၃၀၀ ခန့်ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။
18 July 2012 10:33
Dear Saya Anonymous, In order to avoid and prevent the ethnic (whether legal or illegal) conflict,every Government (G) must have the population counter balance "Plan or Strategy", especially to be very verycareful with the radical Islam Muslim not only for the population counter balance but also the curriculum the "Imams" teach in their mosque and the last but not least is corruption As our G, they can follow suit and/orcopycat below mentioned countries ortheir (our G) own Plans.1. Why S'pore G granted citizenship tomany Myarmese, Indian and Chinese frommain China is not only to fill theshortage of skill workers but also to counter balance the Malay Muslimpopulation growth due to S'pore women'sbirth rate declination.2. Once Chine communist G occupied TibetI think 1951, the G forced their Han ethnic Chinese to migrate Tibet to counter balance the Tibetan population.3. In China, official Muslim figure isabout 25 millions (Ms) but estimation said 100Ms. Prior to teach the curriculum in mosque, it must be submitted to the Gset-up panel to approve the curriculum.And entire Chinese population must abidethe rule of "One Family One Child Policy"irrespective of religious.4. Our G should also study how the other countries G such as Scandinavians, US madethe settlement of asylum-seeker in their countries.5. Some critics said that one of the cause of USSR collapsed was corruption. if our Gis not taken seriously, firmly and immediately the corruption otherwise "Our Myanmar Country" will become "Kyun Taw Myo Country" in 50Ys withoutNorthern, Western and Southern parts of our country due to there areadimeadozen of Chine and Muslim in those region legally or illegally granted the national ID card.
ကွန်ကရစ် အမြန်လမ်းမကြီးနှင့် ယာဉ်အန္တရာယ်
မေ ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ခရီးသည်ယာဉ် မတော်တဆမှုကြောင့် ၁၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပြီး ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ယာဉ်မတော်တဆမှု မကြာခဏ ဖြစ...
ဆိတ်လစေ့နိုင်ငံရေး ကွန်မြူနစ်အဆွေး ဝင်းတင်ဆိုတဲ့ ဖောက်ပြန်ရေးသမားကြီးကို နေရာပေးကြ (သခင်ဆိုး)
From : ..ပလေတို ဒီမို
အခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီး လုပ်မယ် ဆိုတော့ ၀င်းတင်ဆိုတဲ့ ခေါင်းဖြူ စွယ်ကျိုးကြီးက သေနာလား၊ ထိပ်ထားလား ...
သံဃာတော်များအား ဆင်းတွန်းခိုင်းပြီး မောင်းပြေးသော Probox TAXI ယာဉ်အား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ၂၂ နာရီ အ တွင်း ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး
၂၃.၅.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၁၀၀ အချိန်တွင် သီလဘန်ကျောင်းတိုက်နေ ဆရာတော်ဦးနန္ဒသာရသည် ရေးမြို့ မှ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးသို့ ရောက်ရှိလာပြီး Probox အဖြူရောင် အဌားယာဉ် (နံပတ်...
တိုင်ရင်းသူတစ်ယောက် မွတ်ကုလားကိုယူလျှင် ဘာဖြစ်လာမည်နည်း.....
(၁) မိမိကိုးကွယ်သော ဘာသာကို ပစ်ပယ်ပြီး ပူဆလင်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းရလိမ့်မည် (တချို့က ပြောကြသည်....မိမိကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ၏ ရုပ်ပုံကားချပ် များကို ခြေဖြင့် ...